Ndeupi Mhando yeTV Yandinogona Kushandisa neEMD? - Nyore Multi Ratidza
Rudzii rweTV yandinogona kushandisa neEMD?
Yakagadzirwa Pa 04 / 11 / 2019
Kuva nezvikwangwani kurudyi kwakakosha mukuita kwechiratidziro chako saka mubvunzo uri nderudzii rweTV rwandinogona kushandisa neEMD?
Isu takaisa misoro yedu pamwe chete uye tauya nemimwe mibvunzo yekuzvibvunza usati wasarudza zvigadzirwa zvako zvekuratidzira.
1. Ndeipi bhajeti yako?
Kana iwe ukanyanya kuita zvisarudzo zvichienderana nemitengo, saka kuziva bhajeti yako kunokosha usati watanga kuitira kuti iwe uzive zvaunokwanisa uye usatambisa nguva uchitarisa pane zvisarudzo zvisiri mukati memutengo wako.
2. Chii chinangwa chekuratidzira kwako?
Vanhu vanoshandisa kuratidzwa kwezvikonzero zvakawanda zvakasiyana, vamwe varidzi madiki varidzi vanoratidza menyu yavo pane imwe diki mukati meresitorendi yavo, saka inodhura generic brand TV inogona kukodzera ivo zvakangonaka, asi vamwe vatengi vakakura vanoshandisa zvimwenje izvi sepaupamhi kushambadzira nzvimbo mumahwindo ezvitoro zvavo. uye nekudaro ivo vanotsvaga mamwe machira ekutarisa akakomba nemitsara yekrisiti uye nemabheji madiki. Uchange uchishandisa sei zviratidziro zvako?
3. Iyo screen ichashandiswa kangani?
Iwe uchave uchimhanya kuratidza kwako 24/7, kana kungori maawa mashoma pazuva? Paunenge uchisarudza skrini yako, ive shuwa yekubvunza yako mutengesi wekubatsira nezve skrini yehupenyu-hwepamusoro. Netsika LCD maficha ane hupenyu hwakareba kupfuura hweplasma kuratidzwa, zvisinei tarisa nemutengesi wako wekutengesa kuti uwane iko kutsvaira kwehunyanzvi hwekuita.
4. Chii chichava chimiro chemuviri wako chakaratidza?
Uri kutsvaga tsika yechinyakare chimiro, kana unosarudza kutaridzika kwemifananidzo kune yako skrini?
Yakakura sei madziro kana pasi nzvimbo iwe yaunogovera kune ako kuratidza?
Izvi zvinokuzivisa iwe nezvehukuru hukuru hwechidzitiro iwe chaunogona kufunga nezvacho. Kana iwe uri kuronga kuisa akawanda kuratidza pamwe chete, funga nezve bezel saizi zvakare.
5. Ndeupi rudzi rwekugadziriswa iwe iwe yaunoda?
Iwe unoda here kesi yekutengesa, kana yevaraidzo? Pamwe iwe unoda masuru emadziro, kana purojekita uye purojekita yekuongorora?
6. Rudzii rwechiratidziro iwe rwauri kutsvaga?
Kune zvakawanda zvakasarudzika zvisarudzo munyika yekuratidzira masvikiro.
Yakanakisa TV, inenge 250 cd / m²
Dhizaini yekuratidzira skrini kubva 300 cd / m² kusvika 4000 cd / m² neine nani anti-kuratidzira kurapwa.
Mhinduro dzako kumibvunzo iri pamusoro dzichakubatsira iwe kusarudza pane yekupedzisira sarudzo yako yepakati yekuratidzira.
Mhando dzinozivikanwa dzinozivikanwa mumunda wezvigadzirwa zvemadhijitari LG, Samsung uye NEC.
Nzvimbo dzadzo dzakasarudzika dzinovimbisa yakaderera kukundikana.
Unogona kushandisa chero generic TV zvimisikidzo zvemukati zvisina mwero kujekeswa, zvisinei ziva kuti ivo havangaburitse zvakafanana kuita kana kuvimbika sehunyanzvi dhijitari signage kuratidza.
Kana iwe usina chokwadi kuti rudzii rwechiso rwaunoda, ipapo bata
uye ngatitungamire tungamire mukuwanda kwemamiriro anogona kuitika.
Kuunganidza iyo Dhijitari Signage Puzzle
Dhijitari Kunze-Kwe-Kumba: Iyo Re-Inobuda Medium yeFranchise Brands
5 Mienzaniso Enzira Dhijitari Signage Inogona Kutsigira Mabhizinesi Madiki Mushure mekuvhurwa